आमाको धोती चोलो लाएर दिनमा २० पटक ऐना हेर्दै ह्याण्डसम लोग्नेको काल्पनिक तस्विर सजाउने ति तिज-Brtnepal.com
Loading... आमाको धोती चोलो लाएर दिनमा २० पटक ऐना हेर्दै ह्याण्डसम लोग्नेको काल्पनिक तस्विर सजाउने ति तिज
Published on September 2, 2016 at 10:06 pm
यस वर्षको तिज भदौ १९ गते परेको छ । तिजकै लागि भनेर खासै तयारी छैन मेरो । उसोत बर्षौ भयो तिजमा ब्रत बस्ने र नाचगानमा मिसिन छाडेको । एस.एल.सी. दिएर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आएबाट नै तिज बिरानो जस्तो बन्दै गयो । यता आएको सुरुको वर्षको तिजमा घर जान पाइन । ललीतकला क्याम्पसमा आफू सँगै सङ्गीत विषय लिएर पढ्ने ४ जना साथी भएर पशुपति गएका थियौँ । लाउड स्पीकरबाट निस्केका थरी थरीका भाकाहरुमा नाचीरहेका रंगीन नारीहरूको ठाउँ ठाउँको भिडमा मैले चिनेका कोही थिएनन् । नाच्न मन भए पनि कता गएर मिसिने मेसोमेलो नपाएर घर फर्कीएं । त्यसपछिका तिजमा म कतै गईन ।
बाल्यकाल र किशोरावस्थाका तिजहरु साह्रै रमाइला थिए । मम्मीलाई तिजमा माईत जान साह्रै अप्ठेरो थियो । म र ३ जना भाईबहिनी लिएर जानु पर्ने । त्यसमा पनि ३ दिन अगाडीवाट गाई भैंसीलाई घाँस र कुडोपानीको व्यवस्था मिलाएर मात्र निस्कन मिल्ने । म सबैभन्दा ठुलो बच्चा भए पनि साह्रै जीद्धी थिएँ, हजुरआमा सँग घरमा बस्न नमान्ने ।
बुबाको नेपाल प्रहरीको जागिर, दसैमा त घर आउन नपाउने जागिर तिजमा के को घर आउन पाउने ? म सानो छँदा बुबा कुनै तिजमा घर आउनु भएन । मम्मीलाई लिन कैले सानो मामा आउनु हुन्थ्यो त कैले मामाघरमा काम गर्ने गुरुङ दाइलाई पठाईन्थ्यो । त्यतीबेला गोरखाको पालुङटारमा गाडी गएको थिएन तनहुँको तुरतुरे भन्ने ठाउँमा आएर डुम्रे सम्मको गाडी चढेर बन्दीपुरको उकालो चढ्थ्यौं ।
बिस्तारै ठुलो हुँदै गएँ, तिजमा मामाघर जानु भन्दा घरमा बस्न रमाइलो लाग्न थाल्यो । मम्मी कुनै वर्ष माईत जानु हुन्थ्यो कुनै वर्ष घरमा । फुपुहरुसंग साह्रै मिल्ती भएकाले मम्मीलाई माईत जान नपाएकोमा गुनासो भएको मैले कहिल्यै देखिन ।
कृष्ण अष्टमीबाट बिस्तारै सुरु हुन्थ्यो तीजको रौनक गाउँमा । गीत गाउन र नाच्न भनेपछि म दगुरीहाल्थें । हाम्रो घर गाउँको बिचमा छ । सबै फुपुहरु, भान्जीदीदीहरु आउँदा र हामी घरका समेत हुँदा हाम्र्रो घर भरिभराउ हुन्थ्यो । गाउँका सबै साँझमा छिटोछिटो भात खाएर हाम्रै आँगनमा जम्मा हुन्थे । उमेर गएका हजुरआमाहरु:-
बिहानै उठि पानी लिन जाँदा
कालीमा नागले डस्यो बरिलै
कालीमा नागले डसदा खेरि
माटोको घैंटो फुटयो बरीलै………. भन्दै आफ्ना बैशमा सासुको बुवर्तन सहनु परेका गीत सुनाउथे ।
हाम्रो आमा र फुपुहरु
सिरफुल धुने पानी मैले पाइन
झरें म त दोभान नि बरिलै झरें म त दोभान
अल्लारे केटालाई दिनुभयो बाबा
गयो मेरो जोबान नि बरिलै गयो मेरो जोबान….. जस्ता गीतमा आफ्ना पिडाहरु सुनाउँदै नाच्थे ।
हामी दमलीहरु कुनै आमाहरुले सिकाएका गीत गाउथ्यौं त कुनै एक महिना लगाएर तयार पारेका गीत सुनाउँथ्यौ । हाम्रा गीतमा छोरा छोरीलाई समान अधिकारका माग हुन्थे ।
नारी पाईलट भएनन् कि सगरमाथ चढेनन्
के काम गर्न नारीहरू अघि बढेनन्
टिष्टामा नि पुगे नारी काँगडा नि पुगेथे
के काम गर्न नारीहरू कहिले झुकेथे…..
७ कक्षा पढ्दा मैले लेखेको यो गीत धेरै वर्ष गाईयो । पहिलो पटक तिजको ब्रत बस्दा म १२ वर्षको थिएँ । “बुझ्दो न सुझ्दो, टुडिखेलमा कुददो” भन्ने उखान जस्तै थियो यो ब्रत । मम्मी र फुपुहरुले तिजको ब्रत बसेर बेलुका केरा, दही, दूध मात्र खाने गरेको देखेर मिठो खाने लोभले त्यो वर्ष ब्रत बसें ।
अर्को वर्षको तिज आउने बेलामा १ जना दाइले सुनाउनु भयो, “ठाँटीपोखरीमा तीज गीत प्रतियोगिता हुन्छ रे । तिमीहरू पनि भाग लिन जाओ । ”
यो सुन्नु के थियो, मैले गाउँभरी ढुन्ढरी पिंटे, हामी त तिजमा ठाटीपोखरीमा गीत गाउन जाने हो भन्दै । सबै साथी गीत गाउन सहमत भए, म नाच्ने भएँ । मादल बजाउन पल्लो गाउँको किस्ने र बाँसुरीमा माने दाइ तयार भए ।
फेरी अर्को आपत् आईलाग्यो, त्यहाँ भाग लिन कुनै क्लब वा आमा समूहले मात्रै पाउने रहेछ । म अलि फटाहा नै थिएँ सानैबाट । योजना बनाएँ, क्लब नै किन चाहियो र नाम भए भैहाल्छ दर्ता गर्न, यही सल्लाह भयो । झुटो क्लबको नाम जुटाउन पनि हामीलाई ४ दिन लाग्यो । कोही लालिगुराँस, कोही जनजागृति, कोही प्रगतिशील नाम सिफारिस गर्थे तर ती सबै नामहरू अरू गाउँका क्लबसँग जुधेपछि मैले सुनगाभा बालक्लव नाम राख्ने भनेँ ।
त्यो समय म अलि हर्ताकर्ता नै थिएँ , आँफै गीत लेख्ने, आँफै नाच्ने र मलाई मम्मीले पनि सहयोग गर्ने हुँदा साथीहरू मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ हुन्छ भन्थे, नत्र म बम्किएँ पछि योजना र कार्यक्रम सबै रद्ध गरिदिने धम्की दिन्थें ।
अन्ततः सुनगाभा युवा क्लब भनेर ठाँटीपोखरीमा नाम दर्ता गर्‍यौँ । बाल क्लब राख्ने भनिएपनि माने दाइ र किस्ने उमेरले बालक नभएकाले बाल क्लब नभई युवा क्लब भयो । त्यो बेला एक पटक मात्र सुनेको थिए, सुनगाभा भन्ने फुल हुन्छ भन्ने । किन मन परयो त्यो फुल, अहिले सम्झदा हाँसो उठछ, किनकि मैले आज सम्म साच्चैकै सुनगाभा फुल कस्तो हुन्छ देखेको छैन ।
कार्यक्रमको लागि गीत लेखे, बिच बिचमा क्लबकै नाम राखेर
सधैँ एउटै वेदना आसुँका गीत लेखिन्छ
फक्रिएको सुनगाभा नि उदास देखिन्छ…….
रातभरि गाउने र नाच्ने प्राक्टिस गरियो । अब पालो नाच्ने र गाउनेले के–के लुगा लगाउने भन्ने भयो । गीत गाउनेले हरियो ब्लाउज र रातो सारी लाउने, नाच्नेले चोलो र फरिया लाउने । यो ड्रेस छान्ने काम पनि मैले नै गरेँ । एउटै रङ्ग र ढाँचाको साडि खोज्न वरिपरिका सबै गाउँ डुल्यौं, ६ वटा सारी र १ फरिया जम्मा भयो । कसैले ब्लाउज सिलाए, कसैले आमाका ब्लाउजमा सेप्टि पिन लगाएर काम चलाउने भए ।
अब नर्तकी बन्ने मेरो लागि चोलो खोज्नु पर्‍यो । सानैबाट औषधीले पालिएको म अरूभन्दा साह्रै दुब्लो थिएँ । पल्लो घरकी काकीको चोलो १० वटा सेफ्टि पिन लगाएर लगाउँदा पनि शरीरमा बस्न मानेन । दर्जि दाइलाई सिलाई देऊ भनेको भ्याईंदैन भने । अब सबैभन्दा दुब्लि आईमाईको चोलो खोज्न सबैजना लागिपर्यौ ।
पछि त्यही बाँसुरी बजाउने माने दाइ (मानबहादुर अच्छामी) कि आमाको चोलो मिल्यो । हाम्रो गाउँका आईमाईहरु कुरा काट्न थाले । सर्किनीको चोलो लाउन लागी दिपाकी छोरीले भन्दै ।
मेरो मम्मीले सुनेको नसुन्यै गरिदिनु भयो । “लुगा लाएर जात घटने हो र ? दमाईले सिलाएका लुगा लाउन हुन्छ बरा ती माईली दिदीको चोलो लाउदा के हुन्छ र ? जा गएर ल्याईज ”भन्नुभयो ।
म खुसी हुँदै चोलो लिएर आए । मेरो शरीरमा सिलाए जस्तै टपक्क मिल्यो त्यो चोलो । अहिले सोच्दा लाग्छ, मेरो मम्मी कति राम्रो सोचको मान्छे ।
सबै तयारी भयो । तिजको अघिल्लो दिन हामी रातभरि सुतेनौं । १० पल्ट सारी लाउने र फुकाल्ने गर्दैमा ठिक्क भयो । बिहान कार्यक्रममा सहभागी सबै जम्मा भयौ । बाद्यय सामाग्रीमा मादल र बाँसुरी मात्र थियो तर दौरा सुरुवाल खोज्दा कतै नपाईएपछि हाम्रा बाद्यय बाधकहरु सर्ट पाईन्टमै जाने भए ।
दलित हुनुको मर्का भोग्नु पर्‍यो माने दाइ र किस्नेले । उनीहरूको जातमा दौरा सुरुवाल र स्टकोट लाउने कोही भेटिएनन् । हाम्रा हजुरबा र ठूलाबाहरुले हामी सार्किका छोरालाई आफ्ना लुगा दिंदैनौ भने । दौरा सुरुवाल माग्न मै गएको थिएँ, मलाई हकार्दै पठाए, “यो दयाराम कि छोरी कत्रो हिम्मत भएकी हो ? हामी हाम्रा लुगा एक दिनलाई सार्किलाई लाउन दिन्छौं त ?”
तिनका बुढीहरु कुरा काट्दै हिँडे, आमा चाँहि पनि उस्तै हो आफ्नी छोरीलाई सर्किनीको लुगा लगाउन दिई अब सार्किहरुलाई लुगा खोज्न हाम्रा बुढाहरु कहाँ पठाई भन्दै ।
जे जति जोहोडो गरियो त्यतिमै हामी कार्यक्रममा सहभागी भयौँ । मलाई टिम लिडर बनाइएको थियो । क्लब र आमा समूह गरी १५ समूहले भाग लिएका थिए । रिजल्ट आयो, हामी दोस्रो भयौँ । हाम्रो क्लबलाई सिल्ड(मायाको चिनो) दिईयो साथै पुरस्कार स्वरूप ३ हजार रुपैयाँ र १/१ वटा प्रशंसा पत्र पाइयो । पैसा ९ जनाले बाढेर लियौं । मेरो फुर्तिफार्ती घरमा खुब बढ्यो, त्यो पैसाको धाक बर्षै भरी लगाएँ मैले ।
म नाँचेर दोस्रो भएको कुरा बुवालाई फोन गरेर सुनाए, त्यो बेला गाउँमा न मोबाइल थियो न सिडिएम एको ल्यण्डलाईन फोन । म बुवालाई फोन गर्न घरबाट २ घण्टा हिँडेर तनहुँको तुरतुरे पुगें । बुवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला । त्यहाँ बुवाले सबैलाई सुनाउनु भएछ, दसैमा घर आउँदा बुवाले गौर भन्दा पारी भारतको बर्गेनिया बजार पुगेर एउटा राम्रो फ्रक ल्याईदिनु भयो, जितेको उपहार भन्दै साथै अरू प्रहरी अंकलले मेरो लागि भनेर पठाएका विभिन्न थरीका चकलेटहरु । त्यो फ्रक ल्याएको दिन करिब १५ पटक जति लाउने र फुकाल्ने गरेँ । अरू कपडा भन्दा प्रिय बन्यो त्यो फ्रक, उपहार भएर होला ।
फर्कदा बुवाले मैले लेखेको गीत र पुरस्कार लिँदाको तस्बिर लिएर जानुभयो । त्यो बेला यी कुराको महत्त्व नभए पनि आज आएर सम्झन्छु मेरो बुवा मेरो प्रगतिमा कति रमाउनु हुन्थ्यो । गाउँमा अरूका बाउ आमा छोरीलाई नाच्न गाउन दिन हुन्न भन्थे, मेरो मम्मी बाबाले म भित्रको खुबी निखार्नमा भरपुर मिहेनत गर्नुभयो ।
मैले साह्रै जिद्धि गर्न थाले, त्यसपछिको फोनमा । अर्को वर्षको तिजमा घर आउनुपर्छ बाबा भन्दै । बाबाले हुन्छ भन्नु भयो, तर बिचरा छुट्टी ठेगान नहुने पुलिसको जागिर आउने कुराको आस मम्मीलाई थिएन ।
नभन्दै अर्को वर्षको तिजमा बाबा आउनुभयो, दर खाने दिन राती । हाम्रो तिर तिजको अघिल्लो दिनलाई मात्र दर खाने दिन भनिन्छ । त्यो वर्ष म लडेर गोडामा घाउ भयो, नाच्न नसक्ने भएँ । ठुलो बाबाकी छोरी बिन्दु नाच्ने भई, म गाउनेमा परें । पहिलो वर्ष भन्दा विशेष तयारी थियो । तिजको गीत त ६ महिना पहिला नै लेखि सकेको थिएँ । बाबा मसँगै गाउनु हुन्थ्यो, घरी घरी उठेर नाच्नु हुन्थ्यो । एउटा रमाइलो थपियो बाबाको उपस्थितिले ।
सबै तयारी भयो, म गीत गाउने भएपछि अघिल्लो वर्ष झैँ चोलो खोज्न परेन । मम्मीले ब्लाउज सिलाईदिनु भयो । तिजको दिन ७ बजे नै लुगा लाएर तम्तयार भयौँ ।
फुपुकी कान्छी छोरी ज्ञानु दिदी अलि झक्की हुनुहुन्थ्यो । मेरो बाबा सधैँ हाँसी मजाक गर्ने स्वभावको । ज्ञानु दिदीले सारी लगाएर बाबाको छेउमा गएर सोध्नु भयो, मामा मलाई कस्तो देखिएको छ ? बाबाले हाँस्दै भन्दिनु भयो, सबैलाई सुहायो, ज्ञानु भाञ्जि तपाईँलाई त पटक्कै सुहाएन । बुढी मान्छे जस्तो देखियो । बाबाले यति भन्नु के थियो, दिदीले सारी फुकाले अर्कै लुगा लगाई हिडिदिनु भयो । कता जानु भयो भनेको आफ्नो घर गएर सुतिदिनु भएछ । फुपु र हाम्रो घर १० मिनेटको दुरीमा छ ।
बाबाले ज्ञानु दिदीलाई लुगा सुहाएन भनेको कुरा मलाई र बाबालाई मात्र थाहा थियो । दिदी रिसाएर गएको कुरा कसैलाई थाहा भएन हाम्रा बाउ छोरीले भनेनौं। ९ बज्यो दिदी नआएपछि खोजी भयो । बोलाउन जाँदा म मरे पनि आउँदिन मलाई बुढी मान्छे जस्तो देखिएको छ रे म जादै जान्न भनेर रुन थाल्नु भयो । बल्ल सबले थाहा पाए दिदीको पिडा बाबा नै गएर मैले जिस्काएको भान्जी भन्दा पनि दिदी मान्नु भएन । उता १ घण्टाको बाटो हिडेर ठाँटी पोखरी पुग्नु छ, यता दिदीको रिस उत्रिएन ।
मम्मी बाबालाई कराउन थाल्नु भयो, तपाईँको बानी गतिलो छैन भन्दै । टिममा दिदीको नाम पनि भएकाले छुटाउन मिल्दैनथ्यो । भएभरकाले फकाएर बल्ल बल्ल दिदीलाई तयार पारियो । त्यो दिन सबैले बाबालाई गाली गरे । त्यो पटक हामी तेस्रो भयौँ ।
यसरी पहिलो पटक हामीले सुरुवात गरेको तिज गीतमा भाग लिने चलन अहिले गाउँबाट हामी मुनिका बहिनीहरूले धानि रहेका छन् । हेरक कार्यक्रममा मेरी कान्छी बहिनी पुष्पाञ्जली नृत्य र ठूली बहिनी रोसना गायनमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
उमेर बढदै गएपछि तिजको ब्रत मिठो खाने लोभबाट शिवजी जस्तो पति लोभमा परिणत भयो । आफ्नो सपनाका राजकुमारको काल्पनिक तस्बिर र गुण साथी साथीमा साटिन्थ्यो । आमाहरू नहुँदा धोति र चोलो लगाएर ऐना पनि हेरियो दिनको २० पटक ।
सल्लाह हुन्थ्यो, साथी साथीमा बिहेपछि त कहिल्यै कुर्ता सुरवाल नलगाउने, सधैँ सारी लगाउने, यस्तो रङ्गको चुरा लाउने आदि इत्यादि । तर समय यस्तो कहाँ रह्यो र बिहे पछि सारी नै लगाउँछु भन्ने सबै आजभोली कुर्ता सुरुवाल र टिर्सट पाईन्टमा भेटिनछन् । भेट हुँदा ती दिन सम्झेर हाँस्छौ हामी । साच्चै मेरा ती तिज र आजको तिजमा कति कति अन्तर छ ।